သခင်ယေဇူး ခရစ္စတူး ဒုက္ခစရိယာ ကျင့်ခံတော်မူသော လမ်းတည်း။
ရဟန်းက ဘုရားစင်ခြေရင်းမှာ ရွတ်ဖတ်အပ်သော မေတ္တာ။
ရှိခိုးကိုးကွယ်ခြင်းကိုခံထိုက် တော်မူထသော၊ အို… ယေဇူးသခင်၊ ကိုယ်တော်၏ ခြေရင်း၌ ညွတ်ပျပ်ဝပ်တွားလျက် ရှိ၍၊ အသနားတော်မြတ်ကို ခံလိုသော အကျွန်ုပ်တို့အားလည်းကောင်း၊ သေလွန်ကုန်သောခရစ္ဆတီအန်တို့ အားလည်း ကောင်း၊ ကယ်မသနားတော်မူပါ။ ယခုဆဲဆဲ အောက်မေ့ဆင်ခြင် ရှေးရှုပါအံ့သော ကိုယ်တော်၏ ဒူက္ခစရိယာမှ မဟာကုသိုလ် တော်အကျိုးဆက်ကို၊ အကျွန်ုပ်တို့က ခံစားကြပါစေသောဝ်။ နောက်တော်သို့လိုက်၍ ဒုက္ခစရိယာကို မျက်မှောက်ပြုကြရာ ကြီးစွာသော သံဝေဂစွဲ၍ ဤအသက်အတွင်း မချွတ်တွေ့ကြုံရသော ဒုက္ခဆင်းရဲနှင့် နှိမ့်ချရှုံ့ချရာကို အသင့် ရိုသေသော သဘောဖြင့် သည်းခံနိုင်ပါမည့်အကြောင်း အား တန်ခိုးပေးသနားတော်မူပါ။
မ။ ။ အို…ဘုရားသခင်၊ အကျွန်ုပ်၏ နှုတ်ခမ်းကို ဖွင့်တော်မူပါအံ့။
ဖ။ ။ ကျွန်ုပ်ကလည်း ကိုယ်တော်၏ ဘုန်းတော်ကို ချီးမြှောက်ပါအံ့။
မ။ ။ အို…..ဘုရားသခင်၊ ကျွန်ုပ်ကို ကူညီစောင်မတော်မူပါ။
ဖ။ ။ အို…ဘုရားသခင်၊ ကျွနု်ပ်ကိုကူညီစောင်မရန် အလျင်အမြန် ကြွလာတော်မူပါ။
မ။ ။ ခမည်းတော်၊ သားတော်၊ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်အား၊ ဘုန်းတော်ဂုဏ်တော်ရှိပါစေ။
ဖ။ ။ အစအဦးက၊ ဘုန်းတော်၊ ဂုဏ်တော်ရှိသည့်အတိုင်း၊ ယခုမှစ၍၊ ကမ္ဘာအဆက်ဆက်ရှိပါစေ။
သေစေဟူ၍၊ သခင်ယေဇူးသည် စီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းကို၊ ခံတော်မူရာအရပ်။
မ။ ။ အို…ကရုစူး၊ အကျွန်ုပ်တို့သည်၊ ကိုယ်တော်ကို ရှိခိုးကိုးကွယ်၍ ချီးမွမ်းထောပနာ ပြူကြပါသည်။
ဖ။ ။ အကြောင်းမူကား၊ ကိုယ်တော်သည်၊ ကရူစူးအာနုဘော်အားဖြင့်၊ လူအပေါင်းတို့ကို ကယ်ချွတ်တော်မူ ခဲ့လေပြီ။
မဟာယေဇူးသည်၊ ကာဣဖါအမည်ရှိသော ရဟန်းပရောဟိတ် ကျောင်းတွင်လည်းကောင်း၊ ဟေရုဒ်အမည်ရှိသော မင်းအိမ်တွင်လည်းကောင်း၊ ကဲ့ရဲ့ခနဲ့ မထီလေးစားပြုခြင်းခံရာမှ၊ ဆင်းလာတော်မူလျှင်၊ ပီလာတူးမင်းရုံးတော်သို့ ဆွဲငင် တွန်းထိုး ပို့ယူကြကုန်၏။ အသားအရေစုတ်ပဲ့အောင် ရိုက်နှက်ကုန်၏။ ဆူးခွေဖြင့် ပြီးသော၊ ဦးဗောင်းကို ကိုယ်တော်မြတ် ခေါင်း တော်ပေါ်မှာ၊ စွပ်နှက်ကြကုန်၏။ ကမ္ဘာကုန်လျှင် မလွဲသက်ရှိသက်မဲ့ လူအပေါင်းတို့ကို၊ စီရင်စစ်ကြောတော်မူအံ့သော ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်သည်၊ သေစေဟူ၍ အသရေမဲ့သူကဲ့သို့၊ စီရင်ချက်ကိုခံချေသည်တကား။
မွန်မြတ်လှသော၊ယေဇူးသည် အကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်စားဝင်၍ ဒုက္ခစရိယာကို ခံတော်မူသည် မှန်ပေ၏။ အကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်ချွတ်ခြင်းငှာ၊ သေစေဟူ၍ စီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းကိုလည်း၊ခံတော်မူသည် မှန်ပေ၏။ အို... ချစ်ဖွယ်လှသော သခင်၊ အကျွန်ုပ် တို့ပြုမိသမျှအပြစ်ကို၊ စိတ်ကုန်၊ ဥာဏ်ကုန်၊ အာနှင့်အမျှ၊စက်ဆုပ်ရွံရှာကြသည်ဖြစ်၍ အသနားတော်မြတ်ကိုခံသဖြင့် ကည လွှတ်ခြင်းချမ်းသာကို ရပါမည့်အကြောင်း၊ တောင်းလျှောက်ကြပါ၏။
ကောင်းကင်ဘုံ၌၊ အာဝေမာရီယား၊ ခမည်းတော်၊သားတော်ဟူ၍ မေတ္တာသုံးပုဒ်ကို ရွတ်သရဇ္စုယ်ပြီးလျှင် ဆိုရအပ်သောမေတ္တာကား။
သေလွန်သောသူတို့၏ အသက်ဝိညာဉ်တို့သည် အသနားတော်မြတ်ခံရ၍၊ ငြိမ်သက်ချမ်းသာစွာ ရှိစေသောဝ်၊ အာမင်။
ရဟန်းသည်၊ တစ်ရပ်က တစ်ရပ်သို့ ကြွ၍၊ ပြောင်းစဉ်တွင်၊ ရွတ်အပ်သော မေတ္တာပုဒ်ကား။
သခင်ယေဇူးသည် ကရူးစူးကို ထမ်းယူတော်မူသည့်အရပ်။
မ။ အို… ကရုစူး၊ အကျွန်ုပ်တို့သည်၊ ကိုယ်တော်ကို ရှိခိုးကိုးကွယ် ချီးမွမ်းထောပနာ ပြုကြပါသည်။
ဖ။ အကြောင်းမူကား၊ ကိုယ်တော်သည်၊ ကရူးစူးအာနုဘော်အားဖြင့်၊ လူအပေါင်းတို့ကို ကယ်ချွတ်တော်မူခဲ့ပြီ။
လွတ်လပ်ရာမရှိ၊ တစ်ကိုယ်လုံး ဒဏ်ရာနှင့် ပြည့်ငြားသော်လည်း၊ ကိုယ်တော်၏ ပခုံးပေါ်မှာ၊ အလွန်လေးသော၊ ကရူးစူးကိုတင်ကြ၏၊ ကိုယ်တော်မြတ်မူကား၊ နူးညံ့သိမ်မွေ့ သောစိတ်နှင့်၊ ထိုကြိးမားသော ကရူစူးကို ခံယူတော်မူခြင်းအား ဖြင့်၊ လူအပေါင်းတို့ကို၊ ကယ်ချွတ်တော်မူမည့် အလိုတော်ရင်းရှိသောကြောင်း၊ အားရလှသောစိတ်နှင့် ထိုကရူစူးကို ခံယူတော်မူသတည်း။
အကျွန်ုပ်တို့ကို အသနားတော်မြတ် ခံပါသည်။ အသက်မကွာ ကြံမြဲဒုက္ခဆင်းရဲကို၊ သိမ်မွေ့နှိမ့်ချ ရိုသေစွာသည်းခံ ၍ နောက်တော်သို့ အားမလျော့ ရဲရဲလိုက်လိုသော စေတနာစိတ်ကို၊ ဒုက္ခစရိယာ မဟာကုသိုလ်တော်ကို ထောက်တော်မူ၍ ပေးသွင်းတော်မူပါ၊ ယေဇူးအကျွန်ုပ်တို့သခင်။
(ကောင်းကင်ဘုံ၌၊ အာဝေမာရီယား။ ခမည်းတော်၊ သားတော် )
သခင်ယေဇူးသည်၊ ကရူစူးထမ်းရာတွင် ပထမတစ်ကြိမ် လဲတော်မူသည့်အရပ်။
မ။ အို…. ကရုစူး၊ အကျွန်ုပ်တို့သည်၊ ကိုယ်တော်ကို ရှိခိုးကိုးကွယ်၍ ချီးမွမ်းထောပနာပြုကြပါသည်။
ဖ။ အကြောင်းမူကား၊ ကိုယ်တော်သည် ကရူစူးအာနုဘော်အားဖြင့်၊ လူအပေါင်းတို့ကို ကယ်ချွတ်တော်မူခဲ့ပြီ။
ကိုယ်တော်သည် အလွန်လေးသော၊ ကရူစူးအောက်မှာ၊ ကုန်း၍ ဟိုက်လျက်ရှိတော်မူသည်တကား။ ကာလ္လဝါရီတော်ထက်သို့ ရွှေစက်တော် ပြောင်းစပြုတော်မူ၍၊ ယုတ်မာသောသူတို့၏ အပြုအမူ၊ နှုတ်ကျူး လက်ကျူးမှုများကို၊ သည်းခံတော်မူသည်။ သံလွင်ဥယျာဉ်တွင်၊ ခံတော်မူခဲ့သော ဝေဒနာကြောင့်၊ မောပန်းခြင်း အားကြီးလှ၍၊ ဒဏ်ရာဒဏ်ချက် အပြည့်ရှိတော်မူသည်။ ခွန်အားနည်းပါး၍ ကရူစူးအောက် မြေပေါ်မှာလဲတော်မူသည်။
အကျွန်ုပ်တို့ အပြစ်များကြောင့်၊ အလွန်လေးသော၊ ကရူစူးကို ထမ်းယူတော်မူစဉ်တွင်၊ ထိုကရူစူးအောက်၌၊ လဲတော်မူသော အို….ယေဇူးသခင်၊ ကိုယ်တော်ကျင့်ခံတော်မူသော၊ ဒုက္ခစရိယာကို ဆင်ခြင်အောက်မေ့သဖြင့်၊ သမ္မာသတ္တိ၊ သမ္မာဝီရိယနှင့် ကိုယ်စိတ်နှလုံးတို့ကို၊ စောင့်စည်းချုပ်တည်း၍ မကောင်းရှိသမျှကို ကြဉ်ရှောင်ပါမည့်အကြောင်း၊ အားတန်ခိုး ပေးသွင်းတော်မူပါ။
ကောင်းကင်ဘုံ၌၊ အာဝေမာရီယား၊ ခမည်းတော်၊ သားတော်၊
သခင်ယေဇူးသည်၊ မယ်တော်နှင့် လမ်းတွင်တွေ့ကြုံတော်မူသည့် အရပ်။
မ။ အို….ကရုစူး၊ အကျွန်ုပ်တို့သည်၊ ကိုယ်တော်ကို ရှိခိုးကိုးကွယ်၍ ချီးမွမ်းထောပနာပြုကြပါသည်။
ဖ။ အကြောင်းမူကား၊ ကိုယ်တော်သည်၊ ကရူစူးအာနုးဘော်အားဖြင့်၊ လူအပေါင်းတို့ကို၊ ကယ်ချွတ်တော်မူခဲ့ပြီ။
သခင်ယေဇူးသည်၊ ကရူစူးကိုထမ်းတော်မူလျက်၊ လဲသောကြောင့် ဒဏ်ရာဒဏ်ချက် အနာအဆာထ၍ ဝေဒနာကြီးပြင်းလှ၏။ ရှေ့တိုး၍ ရွှေစက်တော်ပြောင်းတော်မူလျှင်၊ မယ်တော်နှင့် လမ်းတွင် တွေ့ကြုံတော်မူ၏။ ဤတွေ့ကြုံ ခြင်းကား၊ အဘယ်သို့သော တွေ့ကြုံခြင်းနည်း။ သန်လျက်နှင့်တူ၍၊ မယ်တော်၏ နှလုံးတော်ကို၊ ထိုးဖောက်သော နာကျင်ခြင်း ဝေဒနာကို၊ မည်သို့အားဖြင့်၊ ဆင်ခြင်၍၊ ပြပါမည်နည်း။ သားတော်လည်း၊ မိမိမယ်တော်၏ ပူဆွေး၊ နာကျင်ခြင်းကို၊ မြင်တော်မူလျှင်၊ ရွှေနှလုံးတော်၌ ဖြစ်ရာကို၊ မည်သူအောက်မေ့ဆင်ခြင်နိုင်ပါမည်နည်း။
အို….ယေဇူးသခင်၊ ကိုယ်တော်၏ မယ်တော်၌ သက်တော်မူသည့် ကြင်နာသနားခြင်းကို ထောက်တော်မူ၍ အကျွန်ုပ်တို့အား သနားတော်မူပါ။ ပူဆွေးနာကျင်လှသော၊ အို….မယ်တော်မာရီယား။ သားတော်သည်ကျင့်ခံတော်မူသော၊ ဒုက္ခစရိယာကိုထောက်၍ အကျွန်ုပ်တို့အဖို့ငှာ ထပ်ဆင့်ဆုတောင်းတော်မူသဖြင့်၊ အဆုံးစွန်သောနေ့၌၊ အမျက်တော်နှင့် ကင်းလွတ်ကြနိုင်မည် အကြောင်း မစတော်မူပါ။
ကောင်းကင်ဘုံ၊ အာဝေမာရီယား၊ ခမည်းတော်၊ သားတော်၊
ရဟန်းသည်၊ တစ်ရပ်က တစ်ရပ်သို့ကြွ၍ ပြောင်းစဉ်တွင်၊ ရွတ်ဆိုအပ်သော မေတ္တာ။
အာဏာသားတို့သည် ဆီမုန် ဆီရေနေဦးကို သခင်ယေဇူးကိုယ်စား ကရူစူးကိုဝင်၍ထမ်းစေသည့်အရပ်။
ကိုယ်တော်၌ ခွန်အားကုန်၍ ရှေ့သို့ ရွှေစက်ကိုပြောင်းတော်မမူနိုင်သော ကြောင့်၊ အာဏာသား သူယုတ်တို့သည်၊ ဆီမုန် ဆီရေနေဦးမည်သော သူကို အနိုင်အထက်ပြု၍၊ သခင်ယေဇူးကိုယ်စား၊ ကရူစူးကို ထမ်းစေကုန်၏။ ဆီမုန်ဆီရေနေဦး သော်ကား၊ ကရူစူးအာနုဘော်ကြောင့်၊ စိတ်ထားရင်းလည်းပြောင်း၍ တပုံတခြားဖြစ်လာလျှင်၊ ရှေ့လက်ဦး မနှစ်သက်၊ မခံလိုသော၊အရာကို နောက်ကို စိတ်ပါကိုယ်ရောက်၊ ဝမ်းသာစွာ ထမ်းယူလေ၏။
အို….ယေဇူးသခင်၊ ကျေးဇူးပြုတော်မူ၍ အကျွန်ုပ်တို့သည်၊ ကိုယ်တော်နှင့်အတူ၊ ကရူစူးထမ်းရပါမည့်အကြောင်း ကရူစူးထမ်းခြင်း၌ သာလျှင် အကျွန်ုပ်တို့ ဂုဏ်ဖော်ကြပါမည့်အကြောင်း ကရူစူးအာနုဘော်တော်အာဖြင့်၊ လောကီသားတို့ နှစ်သက်ရာကိုမလိုက်၊ စွန့်ပစ်နိုင်မည့်အကြောင်း၊ သခင်၏ နာမတော်မြတ်ကြောင့်၊ ဒုက္ခဆင်းရဲရောက်တိုင်း၊ ကျေးဇူးတော် ထင်မှတ်၍၊ မတွန့်မတိုဘဲ၊ ဝမ်းသာဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့် သည်းခံနိုင်ပါမည်အကြောင်း၊ အားတန်ခိုးပေးသွင်းတော်မူပါ၊ သခင်။
ဝေရောနီကားအမည်ရှိသော၊ မိန်းမတစ်ယောက်သည်၊ သခင်ယေဇူး၏ မျက်နှာတော်ကို ပုဝါနှင့် သုတ်သည့်အရပ်။
ဖ။ အကြောင်းမူကား၊ ကိုယ်တော်သည်၊ ကရူစူးအာနုဘော်အားဖြင့်၊ လူအပေါင်းတို့ကို၊ ကယ်ချွတ်တော်မူခဲ့ပြီ။
ရွှေမျက်နှာတော်၌၊ ချွေးစီးယိုတော်မူ၍၊ ကိုယ်တော်သည် ရှေ့သို့ ကြွလျှောက်တော်မူလျှင်၊ မိန်းမတစ်ယောက်သည် ကြင်နာသနားခြင်းစိတ် စွဲ၍ ငယ်သားအစုထဲသို့ ဝင်သဖြင့်၊ ရွှေမျက်နှာကို ပုဝါဖြင့်၊ သုတ်လေ၏။ ထိုမိန်းမပြုမိသော၊ ကျေးဇူးကောင်းမှုကို၊ သိတော်မူ၍ ဆပ်တော်မူချင်သော၊ ရွှေစိတ်တော်ရှိတော်မူသောကြောင်း၊ ကိုယ်တော်သည် ရွှေမျက်နှာ တော်ပုံကို၊ ပုဝါပေါ်၌ ကပ်စွဲစေတော်မူသတည်း။
အို….ယေဇူးသခင်၊ ကိုယ်တော်၏ ဒုက္ခစရိယာကို ရှေ့ရှေုထောက်မျှော်၊ ဆင်ခြင်သဖြင့်၊ အလွန်ရိုသေကြင်နာတတ် သောစိတ်၊ ကျူးလွန်မိသော အပြစ်များကြောင့်၊ ပြင်းထန်သော နာကျင်ခြင်းစိတ်၊ ဆပွားတိုးတက်သော သဒ္ဒါမြတ်နိုးခြင်းစိတ်၊ ဤစိတ်သုံးပါးကို အကျွန်ုပ်တို့၌၊ အမြဲစွဲအောင် ကယ်မတော်မူပါ။ အကျွန်ုပ်တို့သည်၊ အရှင်သခင်နှင့် တူပါအံ့သည်တိုင်အောင် သခင်၏ အသွင်ရွှေပုံတော်ကို၊ အကျွန်ုပ်တို့၏ နာမ်ဝိညာဉ်၌ ကပ်ရိုက် စွဲစေတော်မူပါ။
သခင်ယေဇူးသည် နှစ်ကြိမ်မြောက် မြေပေါ်တွင် လဲတော်မူသည့်အရပ်။
ကိုယ်တော်သည်၊ အရိုက်အနှက် ဆင်းရဲအမျိုးစုံခံခြင်းကြောင့် တစ်ချက်၊ သွေးယိုစီးခြင်းကြောင့်တစ်သွယ်၊ ခွန်အား နည်းပါး၍ မြေပေါ်မှာ နှစ်ကြိမ်မြောက် လဲတော်မူသည်။
အို…ယေဇူးသခင်၊ ကိုယ်တော်ခံတော်မူသည့် ဒုက္ခအောက်မှာလည်းကောင်း၊ အကျွန်ုပ်တို့ အပြစ်ဒုစရိုက် အလွန်လေးသော ဝန်အောက်မှာလည်းကောင်း၊ လဲတော်မူသည်။ တရားတော်ကို ပြစ်မှားကျူးလွန်သဖြင့်၊ အထပ်ထပ် အကြိမ်ကြိ်မ်၊ ရွှေနှလုံးတော်နာကျင်အောင် ပြုမိပါပြီ။ အို….သခင်၊ ကျွန်ုပ်သည်ထပ်၍ အပြစ်မကောင်းမှုကို ပြုရအံ့လျှင်၊ ယခုပင်မချွတ်၊ အသက်အသေခံပါစေသောဝ်။
ယေရုဇလင်မြို့၊ မိန်းမတို့သည် နောက်တော်သို့ လိုက်၍ သခင်ယေဇူးအတွက်ကြောင့် ငိုကြွေးကြသည့်အရပ်။
ယေရုဇလင်မြို့သူ မြို့သားတို့တွင်၊ အချို့သောမိန်းမတို့သည်၊ အရိုက်အနှက်အပူအပန်းခံသော ယေဇူးကို၊ ဖူးမြင်ရလျှင်၊ ကြင်နာခြင်းစိတ် အထူးသဖြင့်သက်၍ ငိုကြွေးညည်းတွားကြ၏ ။ မြို့တော်ကြီးအပေါ်မှာ၊ မကြာဆဲဆဲရောက်ရ အံ့သော ဘေးဒဏ်ကို မြော်မြင်တော်မူလျှင်၊ ထိုမွန်မြတ်သော မိန်းမများဘက်သို့ ရွှေမျက်နှာတော် လှည့်တော်မူ၍ သမီး များ တို့၊ ငါ့အတွက်ကြောင့်၊ မငိုကြွးကြနှင့်၊ သင်တို့အဖို့ သင်တို့၏ သားသမီးတို့အဖို့ ငိုကြွေးကြလော့ဟု ဗျာဒိတ် တော် ရှိ၏
အကျွန်ုပ်တို့သည်၊ အပြစ်ရှိသောသူဖြစ်ပါသည်။ ကိုယ်တော်ခံတော်မူသော မဟာဒုက္ခအကြောင်းရင်းကား၊ အကျွန်ုပ်တို့ ပင်ဖြစ်သည်ကို ဆင်ခြင်အောက်မဲ့လျှင်၊ သြော်-အရှင်သခင်၊ နာကျင်လှ၍ ငိုကြွေးကြပါ၏။ ဤယခုမျက်မှောက် ဘဝ ကိုယ်တော်ကို ပစ်ပယ်သော သူတို့ခံရအံ့သော ဒဏ်မှ အကျွန်ုပ်တို့ ကင်းလွတ်၍၊ နောင်ဘဝ အခွင့်ချမ်းသာကို ခံထိုက် ရအောင်၊ ငိုကြွေးခြင်း သံဝေဂစိတ်ကို အကျွန်ုပ်တို့အား ကယ်မ၍ ပေးသွင်းတော်မူပါ။
သုံးကြိမ်မြောက် မြေပေါ်တွင် လဲတော်မူသည့်အရပ်
ကိုယ်တော်မြတ်သည်၊ ကာလ္လဝါရီတောင်ပေါ်သို့ ရောက်လုပြီး။ ကရူစူးတံကျင်၌ သတ်ထားခြင်းကို၊ ခံတော်မူအံ့သော အရပ်သို့ ရောက်တော်မမူမီ၊ အားကုန်သောကြောင့်၊ သုံးကြိမ်မြောက် လဲတော်မူလေ၏။ ဤသို့လဲတော်မူသော်လည်း၊ အာဏာ သားသူယုတ်တို့သည် အသနားမဲ့၊ ရက်စက်သောစိတ်ဖြင့် ကိုယ်တော်မြတ်တွန်းထိုးဆွဲငင်အပူတပြင်း ရိုက်သေး သတည်း။
အို…. ယေဇူး၊ အကျွန်ုပ်တို့သခင်၊ နာကျင်လှ၍ သုံးကြိမ်မြောက်အောင်၊ လဲတော်မူသည် အခြင်းအရာ၊မဟာကုသိုလ် တော်ကို ထောက်၍ အကျွန်ုပ်တို့ကျူးလွန်ပြစ်မှားမိသမျှကို လည်းကောင်း၊ အကျွန်ုပ်တို့မိုက်မှားရာ၌၊ ကြာမြင့်စွာနေမိ သည်ကို လည်းကောင်း၊ ကညလွှတ်တော်မူပါ။ ထိုမှတစ်ပါး ကိုယ်တော်ခံတော်မူသည့် အံ့ဖွယ်သောဒုက္ခကို အောက်မေ့ သဖြင့်၊ အကျွန်ုပ်တို့ ကျူးလွန်မိသမျှကို တိုး၍ တစ်နေ့တစ်ခြား ရွံရှာမုန်းနိုင်အောင်၊ ကျေးဇူးတော်ကို ပေးသနားတော်မူပါ။
သခင်ယေဇူး၏ ဝတ်လုံတော်ကို ချွတ်ခွာကြသည့်အရပ်
အသက်တော်စွန့်၍ ပူဇော်တော်မူအံ့သော အရပ်သို့ ရောက်တော်မူလျှင် အာဏာသားတို့သည်၊ သခင်ယေဇူးကို တံကျင်၌ ရိုက်ထားကြအံ့ဟူ၍ အစပြုကြကုန်၏။ ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်မှ၊ ယိုစီးသော အသွေးအားဖြင့်၊ အသားအရေကို ကပ်လျက်နေသော အဝတ်စုကိုဆွဲငင် ချွတ်ခွာကြသည်ဖြစ်၍၊ အလွန်စင်ကြယ်တော်မူသော ကိုယ်တော်သည် မတ်တတ်ကြည့် နေသောသူအပေါင်းတို့၏ ရုတ်ချကဲ့ရဲ့ပြုခြင်းတို့ကို ခံတော်မူ၏။
အို…သိမ်မွေ့နုညံ့လှသောသခင်။ ကျွန်ုပ်တို့မကောင်းသော အပြုအမူများကြောင့်၊ ထိုအလွန်ရှက်ဖွယ်သော အခြင်းအရာကို၊ ကျင့်ခံတော်မူပေသည်။ လောကီသားတို့၏ မျက်နှာကို၊ ထောက်စာတတ်သောစိတ်၊ ထောင်လွှားသောစိတ် မာန်မာနစိတ်များကို အကျွန်ုပ်တို့မှ ပယ်ရှားတော်မူပါ။ နောက်ဘဝမှာ ကြောက်မက်ဖွယ်သော ဘေးမှ၊ ကင်းလွတ်နိုင်မည့် အကြောင်း၊ ယခုဘဝမှာ ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးကို နိမ့်ချချုပ်တည်းနိုင်အောင် အကျွန်ုပ်တို့အား အားတန်ခိုးပေးသနားတော်မူပါ။
သံမယ်နနှင့် ကရူစူးတံကျင်ပေါ်မှာ လက်ဖဝါးခြေဖဝါးတော်တို့ကို၊ ရိုက်ထားကြသည့်အရပ်။
သည်အရပ်မှာ၊ အာဏာသားတို့သည်၊ ကရူစူးတံကျင်ကို မြေ၌ ချထား၍ အပေါ်မှာသခင်ယေဇူးကို ဆွဲငင်လှဲ ပက်လက်လှန်၍ ချည်နှောင်ကြ၏ ထိုသောအခါ၊ ကိုယ်တော်မြတ်သည်၊ လူအပေါင်းတို့အတွက်ကြောင့်၊ ဒဏ်ရာနှင့်ပြည့် သောသခင်အား ပူဇော်တော်မူ၏။ ပူဇော်တော်မူပြီးလျှင်၊အသက်တော်အသေခံတော်မူမည့်အကြောင်း၊ သူသတ်ကို့အား မိမိကိုယ်ကို အပ်နှံတော်မူ၏။ သူသတ်တို့လည်း လက်ဖဝါး ခြေဖဝါးတော်တို့၌ ကြီးသောသံမှုံကိုရိုက်နှက်ကြသတည်း။ အသွေးတော် အလိမ့်လိမ့်ယိုစီးလေသည်တကား။
တံကျင်ပေါ်မှာ၊ တွဲလွဲနေတော်မူသော အို…ယေဇူးသခင်၊ ကိုယ်တော်၏ ကရူစူးခြေရင်း၌ မကွာစိတ်နှလုံးဖြင့် အမြဲမကွာ တွယ်ကပ်အောင် ကယ်မတော်မူပါ၊ ကိုယ်တော်နှင့် အသက်ထက်ဆုံး ပေါင်းယှက်လျက်နေပြီးမှ၊ အကျွန်ုပ်တို့ နာမ်ဝိညာဉ်ကို ရွှေလက်တော်၌ အပ်နှံရပါမည့် ကျေးဇူးတော်ကို ကယ်မသနားတော်မူပါ။
သခင်ယေဇူးသည် ကရူစူးပေါ်မှာ၊ အသက်တော်ကို စွန့်တော်မူရာ အရပ်
သခင်ယေဇူးသည်၊ သံစွဲရာလက်နှစ်ဘက်တို့ဖြင့်၊ ၃-နာရီတိုင်အောင်၊ ကရူစူး၌ တွဲလွဲနေတော်မူခဲ့ပြီ၊ အသွေးတော်သည်၊ ပန်း၍ယိုစီးသဖြင့်၊ တစ်ကိုယ်လုံး၌ သွေးချောင်းအပြည့်ရှိ၍ မြေကြီးပေါ်မှာလည်း အနှံ့အပြားရှိ၏။ အတိုင်းမသိသော ဒုက္ခကို ခံတော်မူရာတွင်၊ သူသတ်တိုအပေါ်မှာ၊ ဆုတောင်းတော်မူခဲ့ပြီ၊ စိတ်ကောင်းသွင်းမိ၍၊ အတူခံရသော သူခိုးတစ်ယောက်ကို၊ အသက်ရှင်ခြင်း ချမ်းသာကို ကတိထားတော်မူလျက်၊ မယ်တော်ကို ချစ်သော တပည့်တော်အား၊ အပ်လိုက်တော်မူ၍၊ ယခု ခပ်သိမ်းသောအရာ အချက်ပြည့်စုံပါပြီဟု၊ မြွက်တော်မူပြီးမှ၊ ဦးညွတ်တော်မူ၍၊ အသက်တော်စွန့်လိုက်တော်မူ၏။
အသက်တော်ကို၊ မငဲ့ကွက်ဘဲ၊ ကရူစူးအပေါ်မှာ သေသည့်တိုင်အောင်။ အကျွန်ုပ်တို့ကို၊ နှစ်သက်နှမြောတော်မူပေ သော၊ အိုချစ်ဖွယ်သော ယေဇူးသခင်။ ထိုကရူစူးကို ရိုသေစွာ၊ အကျွန်ုပ်တို့ ပွေ့ပိုက်ကြပါ၏။ ထိုသေခြင်းအကျိုးကို အကျွန်ုပ်တို့၊ ထင်စားခိုလှုံအမှီပြုကြပါ၏။ ရှင်သော်လည်းကောင်း၊ သေသော်လည်းကောင်း၊ အကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်တော်၌ တည်နေလိုကြပါသည် ဖြစ်စေသောဝ်။
အလောင်းတော်ကို၊ ကရူစူးပေါ်ကချ၍ မယ်တော့်ရင်ခွင်ပေါ်မှာတင်ထား ကြသည့်အရပ်။
ငယ်သားအစုသည် ကာလ္လဝါရီတောင်ပေါ်က ဆင်းကြကုန်ပြီ၊ ညှိုးငယ်ဆွေး နာကျင်လှသော မယ်တော်၏ စိတ်ကို နှစ်သိမ့်စေခြင်းငှာ၊ အထူးချစ်တော်မူသော တပည့်တော်လည်း၊ ယေရုဇလင်မြို့၊ သမီးသူတော်မများနှင့်သာ၊ ကျန်ရစ်ကြကုန်၏။ အာရိမာတေယုမြို့သား၊ ဇူဇယ်နှင့် နိကော်ဒေမူး နှစ်ယောက်တို့သည် လာ၍ ကရူစူးပေါ်က ချပြီးလျှင် အလောင်းတော်ကို မယ်တော်သခင်မအားအပ်၍၊ ရင်ခွင်ပေါ်မှာ တင်ထားကြ၏။
အထူးအလွန်ပူပန်ပူဆွေး ညှိုးငယ်သော၊ သြော်မွန်မြတ်သော မယ်တော်၊ သခင်မခံရသော၊ ပင်ပန်ခြင်းဒုက္ခကုသိုလ် အကျိုးဆက်ကို၊ အပြစ်ရှိသောလူ အကျွန်ုပ်တို့အား၊ အမျှဝေတော်မူပါ။ အကျွန်ုပ်တို့ စိတ်နှလုံးဆင်းရဲနွမ်းရိခြင်း အဖြစ်ကို၊ ထောက်တော်မမူပါနှင့်၊ တပည့်တော်ကြီး ဇွင်နှင့်မခြား၊ အကျွန်ုပ်တို့၌ မယ်တော်ပြုတော်မူပါ။ သခင်မ သားတော်ယေဇူး ဘုရားသည်၊ အကျွန်ုပ်တို့၊ ဆုတောင်းသံကို၊ ရေရွှနားတော်ယူတော်မူပါသည် ဖြစ်စေသောဝ်။
တပည့်တော်တို့နှင့် မိတ်ဆွေတော်တို့သည်၊ သခင်ယေဇူး၏ အလောင်းတော်ကို အသစ်ဖြစ်သော ကျောက်ခေါင်း တစ်ခု၌ ချထားပြီးလျှင်၊ သင်္ချိုင်းအဝကို အလုံးကြီးလှသော ကျောက်တစ်ခုနှင့်၊ ဖုံးပိတ်ကြကုန်၏။ အလောင်းတော်သည်၊ မိမိတန်ခိုးတော်အားဖြင့်၊ ရှင်ပြန်တော်မူမည့်တိုင်အောင်၊ အသက်မဲ့သောအဖြစ်၌ နေတော်မူ၏။
အို.....မြတ်စွာဘုရားသခင်၊ ကိုယ်တော် ချိန်းချက်တော်မူသော အချိန်နှင့်အရပ်မှာ၊ အကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း မလွဲသေရလိမ့်မည်။ သို့ဖြစ်သော်လည်း အလိုတော်ရှိရာ ပြည့်စုံပါစေ၊ အပြစ်ရှိ၍ ယုတ်မာသောအကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ခန္ဓာမှာ၊ အမိရင်းမြေသို့ ပြန်ဝင်ပါလေစေ၊ ကရုဏာသနားခြင်းနှင့်၊ ပြည့်စုံတော်မူလှသော၊ အို....မြတ်စွာသခင် မသေနိုင်သော အကျွန်ုပ်တို့ နာမ်ဝိညာဉ်ကို လက်ခံတော်မူ၍ ကမ္ဘာကုန်လျှင်လည်း၊ အကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ခန္ဓာ ရှင်ပြန်သောကာလ၊ ကိုယ်တော်အား အဆက်ဆက် ထောပနာပြုနိုင်မည် အကြောင်း၊ သုခရွှေနိုင်ငံတော်မှာ အကျွန်ုပ်တို့ကို သိမ်းယူတော်မူပါ ဖြစ်စေသောဝ်။
ခရစ္စတူးသခင်သည်၊ အကျွန်ုပ်တို့အတွက်ကြောင့် သာမညသောသေခြင်းဖြင့်၊ သေတော်မူသည် မဟုတ်။ ကရူစူး တံကျင် ၌ အသေခံတော်မူသည့်တိုင် သခင်အလိုတော် လိုက်တော်မူ၏။
သြော်…ဘုရားမြတ်စွာသခင်၊ ငဲ့ကွက်ခြင်းမရှိဘဲလျက်၊ သခင်ယေဇူးသည် မိမိကိုယ်တော်ကို သူဆိုးသူယုတ်တို့ လက်တွင် အပ်နှံခြင်းကို ခံတော်မူကြောင်း၊ ဤကရူစူးအပေါ်မှာ ပြင်းထန်စွာသော သတ်ခြင်းကို၊ ခံတော်မူကြောင်း ကိုလည်း ထောက်တော်မူ၍ဤကိုယ်တော်တပည့်စုကို ကြည့်ရှု စောင်မတော်မူပါဟု အသနားတော်မြတ်ခံပါသည်။